ဒီခရစ်စမတ်သည်အမေဇုန်စက်ပစ္စည်းများအတွက်အပြိုင်အဆိုင်ပြိုင်ဘက် Kobo Aura Edition2eReaders အားလုံး
ဒီခရစ်စမတ်ကအမေဇုန်ပစ္စည်းတွေအတွက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ Kobo Aura Edition 2
Amazon (သို့) Apple လိုကုမ္ပဏီတော်တော်များများကအားသာချက်ရှိခဲ့တယ် အနက်ရောင်သောကြာနေ့မှာ သင်၏အကောင်းဆုံးအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုရောင်းရန်နှင့်ရောင်းအားတိုးရန်။ သို့သော်များစွာသောကုမ္ပဏီကြီးများသည်ခရစ်စမတ်လှုပ်ရှားမှုကိုအားကိုးအားထားပြုနေကြသောကြောင့်ဘာသာရေးပွဲများထက်စီးပွားရေးအရဤအတွက်အကောင်းဆုံးသောကမ်းလှမ်းမှုများကိုသိမ်းဆည်းထားသည်။
ခရစ်စမတ်လှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်းအကောင်းဆုံးအရောင်းအ ၀ ယ်များကို ဆက်၍ ပြုလုပ်နေသည့်ကုမ္ပဏီများအနက်တစ်ခုမှာ Kobo ဖြစ်သည်။ Rakuten ၏ ebook လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီသည်အချို့သော eReaders များ ၀ ယ်ခြင်းကိုပိုမိုဆွဲဆောင်ရန်၎င်း၏ Fnac ကဲ့သို့သောမိတ်ဖက်များနှင့်အတူ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဒီကမ်းလှမ်းချက်ယခုအချိန်တွင်၎င်းသည်မော်ဒယ်တစ်ခုတည်းနှင့်သာကန့်သတ်ထားသော်လည်းယခုမော်ဒယ်သည် ebooks ကိုနှစ်သက်သူများအတွက်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောကိရိယာဖြစ်လာလိမ့်မည်။ Kobo Aura Edition2သည်ဈေးနှုန်းကျဆင်းပြီး ၉၉.၉၀ ယူရိုဖြစ်သည်.
Kobo Aura သည်အဆင့်နိမ့်သောစျေးနှုန်းအတွက်အလယ်အလတ်အဆင့် eReader ၏အသွင်အပြင်များကိုဖော်ပြပေးသည်
Kobo Aura Edition2(သို့) Kobo Aura ဟုအမည်ပြောင်းလိုက်သောအခါဖြစ်သည် ၆ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိ eReader တစ်ခု။ ဤဖန်သားပြင်သည်အလင်းရောင်နှင့် E-Ink မှ Carta HD နည်းပညာဖြင့်ထိတွေ့နိုင်သောကိရိယာဖြစ်သည်။ ဒီဖုန်း၏ resolution သည် 1024 x 768 pixels နှင့် 212 ppi။ Kindle Paperwhite အောက်တွင်ရှိသော်လည်းအစဉ်အလာ Kindle ထက်များစွာပိုမိုသည်။
Kobo Aura တွင် Kobo ကိရိယာများနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံမှုများရှိသည် Comfortlight နည်းပညာဆိုလိုတာကကျွန်ုပ်တို့မှာအလင်းရောင်ပြproblemsနာမရှိဘူး၊ ညအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်မီးလုံးမရှိဘဲဖတ်နိုင်သည်။ အားလုံးသည် Comfortlight နည်းပညာ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေသည့်နောက်ဆုံးအဆင့်မြှင့်မှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။
eReader ၏သိုလှောင်မှုပမာဏမှာ4Gb ဖြစ်သည်Caliber ကိုသုံးသောသုံးစွဲသူများသည် eReaders ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်လုံလောက်သည်၊ သို့သော်၎င်းကိုမသုံးသူများစွာအတွက်ဖတ်နိုင်သော်လည်းဖတ်ရှုနိုင်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ဒီစက်မှာ microsd ကဒ်တွေအတွက် slot မရှိဘူး၊ ဒါကြောင့် eReader ရဲ့ internal storage ကိုကျွန်တော်တို့မတိုးနိုင်ဘူး။ ပံ့ပိုးထားသော ebook အမျိုးအစားများသည်ပုံစံအမျိုးမျိုး ၁၄ မျိုးခန့်ပါဝင်သည် အသစ် Epub format နဲ့ mobi format ကိုမီးမောင်းထိုးပြအမေဇုံစတိုးမှ ebook များကြားတွင်ပုံမှန်ပုံစံဖြစ်သည်။
Kobo Aura Edition2တွင်လက်ဖြင့်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသောတိုင်းတာမှုများရှိသည်
ကိရိယာ၏တိုင်းတာမှုများသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - 159 x 113 x 8.5 mm နှင့် 180 gr။ eReader ကိုလက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့်ကိုင်တွယ်ရာတွင်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်သေးငယ်သည့်တိုင်းတာမှုများနှင့်အလေးချိန်သေးငယ်ခြင်း၊ ညအချိန်တွင်စာဖတ်သူများစွာအတွက်အသုံးဝင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ eReader ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုသည်အတော်အတန်မြင့်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်ကိရိယာ၏အလင်းရောင်သို့မဟုတ် Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့အလွဲသုံးစားမပြုပါကလပေါင်းများစွာကြာနိုင်သည်။
Kobo ၏စပိန်လက်တွဲဖော် Fnac မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်မခံနိုင်ပါ ၁၁ မှ ၂၄ ရက်အထိဒီကမ်းလှမ်းချက်ကိုကမ်းလှမ်းမှာပါ
ဒီဇင်ဘာလနှင့်ယခုလ ၃၀ ရက်မှဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်အထိဖြစ်သည်၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်များမှတဆင့်နှင့် Fnac.es. မှတဆင့် အကယ်၍ ကောင်းစွာလက်ခံလျှင်ဤကမ်းလှမ်းချက်သည်ကြာရှည်မည်ဖြစ်သော်လည်းယခုအချိန်တွင်ဤကမ်းလှမ်းချက်၏ဆက်လက်ရောင်းချခြင်းကိုအတည်မပြုရသေးပါ။
Kobo Aura ကို Amazon eReaders သို့မဟုတ် OnyxBoox ကဲ့သို့သောအခြားပစ္စည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Kobo Aura သည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိလာသည်။ ယူရို ၁၀၀ အောက်ဈေးနှုန်းရှိပြီးအလယ်အလတ်တန်းစား eReader ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုကမ်းလှမ်းပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » hardware » စာဖတ်သူများ » ဒီခရစ်စမတ်ကအမေဇုန်ပစ္စည်းတွေအတွက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ Kobo Aura Edition 2
အမှန်တရားကတော့ Kobo ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြိုးစားချင်ခဲ့တာပါပဲဒါပေမယ့်ငါ Kindle ကိုအရမ်းသဘောကျပြီး ...
စကားမစပ်, Kindle Oasis 2017 အမှန်တကယ်ဝမ်းမြောက်သောစိတ် is ဖြစ်ပါတယ်
ငါစာအုပ်ပုံစံများ၏မေးခွန်းအတွက်နောက်ထပ် Kobo တစ်လုံးဝယ်လိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအရမ်းစိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ ငါတွေ့မြင်ခဲ့ပြီးသောအရာမှအံ့သြဖွယ်သော Kindle ဝယ်ဖို့နောက်ပိုင်းမှာငါမျှော်လင့်ပါတယ်!
Javier Zabaleta အစစ်အမှန် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာနံနက်ခင်းစာမျက်နှာများကိုဖွင့ ်၍ အသံအမိန့်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည့်မည်သည့် application ကိုမဆိုသင်သိပါသလော။
Javier Zabaleta reales သို့ပြန်သွားပါ
ဆိုလိုသည်မှာအီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်များကိုသင်ဖတ်နိုင်သည့် APK ဆိုလျှင်၊ စာမျက်နှာများကိုအသံအမိန့်များဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာလာမည့်၊ နောက်၊ ရှေ့၊ နောက်၊
ရောဘတ်တို Rastrojo Fajardo ဟုသူကပြောသည်
ငါ Kobo Aura2ကိုမကြာသေးမီက ၀ ယ်ခဲ့ပြီးပြproblemsနာအချို့ရှိတယ်။ အဲဒါကိုငါဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်လားဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး၊ ပထမဆုံးဝယ်လိုက်တာ၊ ဒါကချွတ်ယွင်းမှုလား၊
စာဖတ်နေစဉ်စာအုပ်သည် PDF ရှိလျှင်၊ ပိုကြီးသောစာလုံးများကိုကြည့်ရန်မျက်နှာပြင်ကိုတိုး။ တိုးရမည်။ သို့သော်ပြtheနာမှာ၎င်းကိုဖန်သားပြင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်အချိန်များစွာကြာသည်။
ငါအရင်က pdf ကနေ epud သို့ကူးပြောင်းသော Epud ကဲ့သို့သောအခြားပုံစံများကိုအသုံးပြုပါက၊ စာအုပ်သည်စတုရန်းအပြင်ဘက်တွင်ရှိနေပြီးဖန်သားပြင်မှာအကြိမ်ပေါင်းများစွာကျန်နေဆဲဖြစ်သည်၊ သို့မဟုတ်ပါကကွန်ပျူတာမှဖြတ်သန်းသောအခါ၎င်းသည်အီလက်ထရောနစ်စာအုပ်တွင်မပေါ်ပါ။
Roberto Rastrojo Fajardo အားပြန်ပြောပါ
Roberto ငါ PDF ဟာပုံမှန်လို့ထင်တယ်။ ငါကြောက်သောပုံစံကိုဖတ်ရန်မည်သည့်စာဖတ်သူမှမှအဆင်မပြေဘူး။ ကျနော်တို့အကြီးဆုံး 10 to (ထူးခြားသော) သို့မဟုတ် 13 than ထက်ပိုကောင်းသည့်အရာ (Sony dpr-s1 သို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုခုနှင့်အခြားအရာများ) သို့သွားရန်လိုလိမ့်မည်။
ငါ Kindle Oasis ရှိခဲ့ပြီ၊ သင်ဖန်သားပြင်ကိုဖြတ်သန်းတိုင်းသင်စာကိုတိုးမြှင့်ရမည်။ ဟုတ်ကဲ့ (Kobo (ကျွန်ုပ်ဗီဒီယိုများတွင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အရာများမှ) သည် Kobo နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတော်အတန်မြန်ဆန်သည်။
pdf မှ epub သို့ပြောင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်မကူညီနိုင်ပါ။ သင် Caliber ကိုအသုံးပြုနေပါသလား။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ် ၀ ယ်လိုက်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်စာမျက်နှာသို့သွားသကဲ့သို့ရိုးရှင်းသောအရာတစ်ခုခုကိုမည်သို့လုပ်ရမည်ကိုမမြင်ရပါ။ ကျွန်ုပ်လိုချင်သောစာမျက်နှာကိုရှာရန်ဘားကိုခတ်ရန်လိုသည်။ ၎င်းသည်အမှားကြီးတစ်ခုဟုထင်မြင်သည်။ ငါ Caliber မှတစ်ဆင့် collection များကိုမဖန်တီးနိုင်ပါ။ coolreader ဖြင့်ဖတ်ရန်တစ်ခုခုကူးယူခဲ့သည်။ သို့သော် Calibre စာအုပ်များကို ebook သို့လွှဲပြောင်းပြီးနောက်၎င်းသည်၎င်းတို့ကို ebook ၏အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်တွင်ရှိသော်လည်းကျွန်တော်မတွေ့ရှိခဲ့ပါ။ နောက်မှသူတို့ကိုတွေ့ပါ။ စာအုပ်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ သူတို့က epub လိုက်နာသောကြောင့်ငါဝယ်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်အဆုံးမှာတော့သူတို့ကိုကြည့်ရတာပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးပါ။ သူတို့ကို kepub ဆီပို့လိုက်ပါ။ ငါမသိဘူး၊ ငါနည်းနည်းစိတ်ပျက်မိတယ်၊ အခုတော့ kindle ဟာပိုကောင်းမလားမသိဘူး၊ နှင့်အခြား ...
ငါ့မှာ Kindle Paperwhite (ငါ့အမေကိုပေးတဲ့) အချိန်ရှိပြီး Kobo Aura H2O ကိုငါသုံးတယ်။ ဒီနေရာမှာအမြန်နှိုင်းယှဉ်ချက်တစ်ခု -
စက်နှစ်မျိုးလုံး၏ဟာ့ဒ်ဝဲသည်အလွန်ကောင်းပြီးဖတ်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ စာဖတ်သူများတွင်ဘေးထွက်အလင်းရှိပြီးလုံလောက်သောဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အလင်းသည်အဖြူရောင်မှအဝါရောင်သို့သွားလျှင်၊ အချို့သောအက္ခရာများသည်အခြားသူများထက်ပိုသောအဓိပ္ပာယ်ရှိသောအနားများရှိသည်ကိုသင်မှန်ဘီလူး သုံး၍ ကြည့်လျှင်၎င်းသည်အထောက်အကူပြုသော်လည်းအလယ်အလတ်ဖြစ်သည်။
သင်တစ် ဦး Kobo ပေါ်တွင်တစ် ဦး တည်းလက်ဖြင့်မဖတ်နိုင်လျှင်, စာမျက်နှာသုံးချိုး setting များကိုရှိပါတယ်ကြောင့်သင်, လက်စွဲစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုကြပြီမဟုတ်။
PDF အတွက်မဟုတ်ဘူး၊ အဲဒီအတွက်တက်ဘလက်ကိုငါသုံးတယ်။
ဒီ Kobo မှာ Kindle မှာမရှိပါဘူး။
၁။ Wikipedia ကိုသုံးပါ။ Kobo တွင် RAE ရရန်လိုသည်
2. ရှုခင်း mode မှာဖတ်ရှုနိုင်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံအဆင်ပြေသည်။
၃။ စာအုပ်ပုံစံ။ ဒါဟာနီးပါးအတင်းအဓမ္မလက်ထပ်ထိမ်းမြားသည်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ မှတ်ချက်များ၊ မာဂျင်များ၊ ဖောင့်များနှင့်အရွယ်အစားများ။
Blackfriday သည် ereaders, ebooks နှင့် book များနှင့်ပတ်သက်သည်